Day: September 14, 2019 - Kichuu
Rakkoon OPDO/ODP inni guddaan Nafxanyaa akka Goftaatti fudhachuu!!
Rakkoon OPDO/ODP inni guddaan Nafxanyaa akka Goftaatti fudhachuu!! Jenneerraa nu dhagayaa Hin muginaa calliftanii Daandii ormaa badhiisaatiin Kan oromoko dhiphiftanii Hamma yoomii dubbii laaqxu Haqa,sabaa yoom dubbattu Rakkoo oromoof oromiyaa Isinumti yoomiin hubattu Ormatti dhadhaa laatanii [Read More]
(Fulbaana 14,2019) Dargaggoo Lataa Guutaa mana hiraarsaa Maa’ikeelaawwii keessatti giddirfamaa fi hiraarfamaa ture. Sababa miidhaa cimaa irra ga’eef dandamachuu dadhabee Fulbaana 13,2019 kaleessa du’aan addunyaa kana irraa darbe. Sirni awwaalcha isaa har’a Fulbaana 14,2019 Godina [Read More]
#Harki_Hanna_Bare_Dooluutu Sossoha (#Ibsa_ABO – Fulbaana 14, 2019) Kamisa Fulbaana 12, 2019 galgala Waajjira Poolisii magaalaa Buraayyuu irratti boombiin darbatamee miidhaa namoota irraa gahe jechuudhaan gochaa kanas (kallattiidhaan maqaa dhawuu baatanis) ABO.dhaan wal qabsiisanii oduun dabballoota ODP/EPRDF.iin tamsa’e [Read More]
Ibsa Eejjannoo Qeerroo Burrayyuu irraa!!! Guyyaa sadiif erga marii gaggeesinee booda Guyyaa har’aa September 14, 2019 ibsa laanneera! 1, Gochi Maqaa balleessuuf kora bittineessaa Oromiyaa irratti OPDO hojjatame Cimsinee balaalleffanna, 2, OPDOn Maqaa #Shanee jadhuun Qeerroo hidhuu, [Read More]
There are things that the power of the military cannot fix; which are to win the hearts and minds of the oppressed people. (This is for OPDO/ODP Oroo do not trust you). Yeroo Ammaa Magaalaa [Read More]
Gannat Zawudee (PhD): ‘Barumsa sadarkaa tokkoffaa miti lammaffaanu afaan dhalootaan ta’u qaban jedha’ Ayyaana waggaa haaraa sababeeffachuun namoota maqaan isaanii miidiyaa irraa fagaatee ture iyyaafanneerra. (bbcafaanoromoo)—Isaan keessaa imaammatni barnootaa haaraan yommuu ka’u maqaan isaanii waliin [Read More]
(SBO – Fulbaana 14,2019) Bor Fulbaana 15,2019. Waggaa tokkoffaa hogganni ABO itti biyya galee fi ABOn waliigaltee mootummaa Itophiyaa waliin irra gahe irratti hundaa’uudhaan ifatti biyya keessa socho’uu itti eegalee dha. Simannaan Fulbaana 15,2018 hoggana [Read More]
OMN: Oduu Guyyaa (Fulbaana 14,2019) ODP fi bulchiinsi Ministira muummee Abiy Ahimad imaanaa Qeerroon itti kenne baachuu dadhabuutu mul’ataa jira jedhu jiraattonni magaalaa Shaashamannee. — Qeerroo uummata biyya kanaa bilisummaa gonfachiiseen asdeebi’anii Mangaa jechuuf yaaluun [Read More]